Ógbè Black Sea Region Arsiv - RayHaber
Pịa na obodo na map iji gụọ akụkọ banyere ụgbọ okporo ígwè Black Sea Region, okporo ụzọ na ụgbọ ala!
Ndị agha Obodo Obodo Ünye'nin Castle, Düzsaylan na İnkur na-ejikọ ọnụ n'okporo ụzọ Akpaş-Niksar bidoro ọrụ. Onye isi obodo nke Ordu Obodo Mehmet Hilmi Güler, imiz Otu anyị na-arụ ọrụ maka ụzọ dị elu, ọhụụ na nke ọma ” [More ...]
A na-agbanwegharị okporo ụzọ Rize site na etiti ruo n'akụkụ osimiri wee napụta ya site na apịtị na arụ ọrụ nrụgide. Otu ndi otu Rize bidoro n’ebe dị iche iche n’obodo ahụ n’ime mmezi ya na idozi ọrụ, agụnyere mgbadoro ụzọ ndị na-agba ụkwụ. [More ...]
Ndị njem nleta obodo na ndị mba ọzọ, nke ghọrọ ebe nlebara anya Cable Car Line na Inverse House dọtara ndị ọbịa n'oge Eid al-Adha. Onye isi obodo nke Ordu Obodo ukwu, onye kwuru na Ters Ev na eriri USB na-enyefe ụgbọ njem na Boztepe mere ka mma obodo ahụ dịkwuo elu. [More ...]
A na-ewu akwa akwa n'akụkụ Osimiri Melet n'okporo ụzọ mmiri Oké Osimiri Ojii site na ntanetị nke Ordu Obodo ukwu. Onye isi obodo nke Ordu Obodo Mehmet Hilmi Guler, “Nke abụọ na Melet Bridge n'okporo ụzọ Osimiri Oké Osimiri Ojii. [More ...]
Ntinye aka na Fiskobirlik Junction
Onye Minista Sayensi, Mmepụta, Nkà na ụzụ na Düzce Faruk Özlü, ezigbo ndị otu na - arụ ọrụ nwere nsogbu okporo ụzọ na oge ụfọdụ ụbọchị Fiskobirlik Junction ka a na-eme n’ule ahụ. N’etiti obodo Duzce, ụmụ amaala na-achọ ma na-eme mkpesa [More ...]
Kezọ igwe kwụ otu ebe a ga-ewu site na Iwepu ramzọ ụgbọ okporo ígwè na Düzce
Obodo Düzce, Istanbul Street mere nkwupụta banyere ọrụ a kwadebere maka. N'ihi ya, ọdịnihu nke okporo ụzọ ahụ pụtara ìhè. N'ime usoro a, a ga-eme nnyocha na etiti obodo iji gbaa ndị mmadụ ume iji bọọlụ eme ihe. Sayensị, Ahịa, [More ...]
Ọzụzụ Mberede na Tunnels
Na mmekorita ya na Ordu Metropolitan Municipality Fire Department na Ordu Tunnel Ma idozi and Operation Chief, ihe ọghọm okporo ụzọ, ọkụ ọgbụgba, nnapụta na ihe ndị ọzọ. Nkuzi na igbala oru iji hu na nchikota ma nwekwuo mmekorita [More ...]
Emeputara TEM Motorway Emeputara Otutu 4.5
Düzce mechiri ụlọ ọrụ TEM n'okporo ụzọ awara Kaynaşlway n'okporo ụzọ na-akpọ ụtụ ụlọ mgbe emechara ọrụ ahụ meghere ụmụ amaala na mgbede ụnyaahụ. Njikọ njikọ na akwa mmiri emere n'okporo ụzọ awara awara na Njikọ Kaynaşlı TEM Motorway arụchaala. 15 March 2019 [More ...]
Ọzụzụ maka ndị ọrụ Çambaşı Plateau Ski Center
Ordu Obodo isi enyemaka ORBEL A.Ş. Enyere ndị ọrụ Sportslọ Egwuregwu Winter Sports na Ski Center na Çambaşı Plateau ọzụzụ ọzụzụ ahụike yana nchekwa nchekwa na mpaghara Kabadüz. Egwuregwu Winter na Ski Resort [More ...]
Njem Transport Services Emela Onodi na Accessibility na Turkey
Minister Turhan, Hamamizade Ihsan Bey Cultural Center, Turkey na co-kwụrụ ụgwọ site EU, Transport na Infrastructure Ministry ekenịmde ke "Accessibility Project nke Njem Transport Services na Turkey" ya okwu na Trabzon Onodi, ngo nanị Transportation na Infrastructure [More ...]
Boztepe Cable Car Line na Ordu
Ordu Obodo isi enyemaka ORBEL A.Ş. A na-elekọta “awa ọrụ 240 nke ụlọ ọrụ ahụ ma na-enye njem n'etiti Alt providesnordu na Boztepe. EGO dị mkpa n'etiti 05.08.2019 na ụbọchị 07.08.2019 Ga Boztepe, otu n'ime mpaghara njem dị mkpa dị na Ordu [More ...]
Dumụ amaala Ordu Na-adọ aka ná ntị banyere ihe ọghọm okporo ụzọ
Dọ aka ná ntị n'ihi ịba ụba nke ihe mberede okporo ụzọ na ụbọchị ndị na-adịbeghị anya, Ngalaba Ngalaba Ọchịchị nke Mọnk na Mkpo Ọkụ dọrọ ụmụ amaala na ndị ọkwọ ụgbọ ala ka ha gbasoo iwu okporo ụzọ. DỌỌR WITH NA WITHB THER THE ULBAFR TR !BỌCHAF! Oke ọsọ nke ọtụtụ ihe mberede okporo ụzọ, [More ...]
Samsun Amisos Hill Cable Ebube Ntanetị maka Nlekọta
Samsun Obodo nke SAMULAS, ‘West Park, onye na-arụ ọrụ elektrọniks ụdọ ahụ, ụdọ, ndị na-ebu ya, gondolas na sistemụ elektrọn niile ruo‘ Nnukwu Mmezi ’were. Rozọ ahụ, nke anaghị akwụsị akwụsị ọrụ ya, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ n'etiti 13.00 na 23.00. [More ...]
Ihe niile maka nchekwa okporo ụzọ
Obodo Ordu, nke na-aga n’ihu n’ọrụ ya iji hụ na nchekwa ụgbọala na-agafe agafe, na-aga n’ihu, ịtụgharị okporo ụzọ, idozigharị na itinye akara nke okporo ụzọ na mpaghara. Iji hụ na okporo ụzọ na-agafe agafe yana paịpụ na ịrụzigharị ụzọ [More ...]
Achọpụtara 5 Star Hotel na Çambaşı
Ordu Obodo isi enyemaka ORBEL A.Ş. na Ordu azụmahịa ụwa na mmekorita ya na 2 puku-altitude Çambaşı Plateau ka emebere ka ewuru ya na nkwari akụ kpakpando 5. Mgbe Çambaşı Plateau gasịrị, Sports Sports na Ski Center [More ...]
Onye isi obodo nke Ordu Obodo Mehmet Hilmi Güler mere nyocha ụfọdụ na Port Ünye tupu nkwadebe “Ünye Port Project bulunan, nke bụ otu ọrụ ọhụụ nke Ordu. Ndị agha ji agha nke ukwuu n'oké osimiri na imeghe maka akụ na ụba, mmekọrịta, njem na itinye ego maka ọrụ [More ...]
Oge Eke Ọgba na-amalite na SAMULAŞ Buses
Samsun Metropolitan Obodo SAMULAı' Academyn Academy Trainings bidoro site na njikwa ụgbọ ala ikpeazụ 'Ichekwa, Nchekwa, Nkasi Obi'. Onye isi njikwa Tamgacı mara ọkwa na a ga-ewebata ngụkọta nke ụgbọ ala 110 na usoro 'Vehicle Telemetry (Karakutu)'. [More ...]
Samsun Amisos Hill Cable Car Ọrụ Na-arụ Ọrụ Nke Na-arụ Ọrụ Ulo
Samsun Obodo Obodo Samulaş A.Ş. Ogologo 320 Amisos Hill Cable Car Line, nke mejuputara uzo abuo, a na-amalite oru mmezi atumatu na 23.07.2019 iji nye oru oma. [More ...]
Yusufeli Dam nọ na ndepụta nke dam dam nke ụwa 7. Queued
Yusufeli Dam, nke a wuru n’elu Osimiri Çoruh, 270 bụ otu n’ime ihe mgbochi mmiri kachasị elu n’ụwa nke nwere ogo anụ ahụ 7. O torola n’ahịrị. 7 na ndepụta nke mmiri ndị kachasị sie ike n'ụwa, nke e wuru na Osimiri Coruh. Yusufeli Dam, nke edobere n’usoro [More ...]
Ordu Boztepe Teleferik Ahịa, Oge na Ezinụlọ
Ogige ụgbọ okporo ígwè Ordu Boztepe bụ otu n'ime ebe nkiri ndị njem na-ewu ewu nke Oké Osimiri Ojii. N'etiti Okporo Osimiri Osimiri Ojii, Ordu bu ulo oru nleta di mkpa nke na-anabata ndi mmadu ma na uzo ma n'okporo uzo ya na ihe ndi mara mma na ihe ndi ozo. [More ...]
Ejighi arụ ọrụ Port Port na irughari ụgbọ mmiri amalite
Mayor nke Obodo Ordu Obodo Ukwu Mehmet Hilmi Güler amalitela ọrụ maka Ünye Port na Altınordu Cruise Port, nke dị n'etiti nkwa nke ntuli aka ma na-esonye n'ime ọrụ ọhụụ nke Ordu. Ojiji ndị agha ọzọ site na oké osimiri, akụ na ụba-mmadụ, [More ...]
Samsun Sivas (Oké) Lines okporo ígwè na-adị ọhụrụ
Gọvanọ Salih Ayhan na Mayor Hilmi Bilgin malitere usoro ntinye okporo ígwè nke Samsun-Sivas (88) kwa afọ, bụ nke e meghere site n'ịtọ ntọala nke Onye Ndú Ukwu Mustafa Kemal Atatürk, malitere 4 na nkwado nke European Union (EU) [More ...]
Ụlọ ọrụ na Technology Minister Mustafa Varank, Filyos Industrial na ha kwuru na ha chọrọ ịghọ a center maka Port Region nke ruru eru ígwè na ígwè investments, "Lee, Turkey si na-emepe emepe na-amị aku na uba, na anyị chọrọ ịghọ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa ecosystems." O wee sị. [More ...]
Nzọụkwụ mbụ maka Amasray
Enwere ike ịmalite ọmụmụ ihe na ọmụmụ ihe maka usoro mwube ihe omimi a nke Amasya Municipality wuru. Amasya Mayor Mehmet Sarı, onye na-enye ndụmọdụ na Mayor Ahmet Yenihan, onye isi Mayor İsmail Kazan, ọkà mmụta sayensị Ali Özel, [More ...]